Ma vie en abondance | Archive par catégorie | spiritualité
Posté le 7 novembre 2017 par abondance
Isika no tompon’ny Fanapahan-kevitra Salamo 145 : 5. Ny lazan’ny voninahitry ny fiandriananao Sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko. Ny zavatra tena mibahana ao an-tsaintsika ao dia ny fahazarantsika andavanandro. Raha miaritreritra an’Andriamanitra hatrany isika ary mieritreritra zavatra tsara dia ho lasa fiainantsika mihitsy ny eritreritra tsara. Betsaka ireo zavatra mandalo ao an-tsaintsika […]
Posté le 1 novembre 2017 par abondance
NY FIADANANA DIA AVY AMIN’NY FAHAIZA-MIFALY AMIN’IZAY EFA ANANANA. Ny hoe mahay mifaly amin’izay efa ananana dia tsy fihetseham-po mihitsy fa fanapahan-kevitra. Tsy midika ihany koa hoe tsy te hiova na tsy te hivoatra. Fa mijery ny lafy tsaran’izay efa azo sy hatrehina. I Timoty 6 : 8. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika, dia […]
Posté le 31 octobre 2017 par abondance
Ny tena fahombiazana dia zavatra tsotra Matio 16 : 26. Fa inona moa no soa ho azon’ny olona, raha mahazo izao tontolo izao, kanefa very ny ainy? Ary inona no homen’ny olona ho takalon’ny ainy? Ny fahombiazana sy ny tombam-bidintsika dia tsy miankina amin’ny zavatra hitan’ny maso. Tsy hoe rehefa nahazo asa tsara araka […]
Posté le 22 octobre 2017 par abondance
MOFONAINA ALATSINAINY 23 OKTOBRA 2017. ASAN’NY APOSTOLY 4:23-31. MAHERY VAVAKA NY VAVOLOMBKELONA MARINA 1) Izay mangataka fahasahiana hitory ny Tenin’Andriamanitra.( 23-29) Mangataka fanavaozana risi-po ny mpianatra eto. Satria ao anatin’ny fitoriana mihitsy izy ireo no iharan’ny fanenjehana. Mba hahafahan’izy ireo manohy ny fijoroana vavolombelon’i Jesoa Kristy ao anatin’izany fanenjehana izany dia tsy maintsy nangataka fahasahiana […]
Posté le 20 octobre 2017 par abondance
MOFONAINA NY SABOTSY 21 OKTOBRA. Matio 26 : 40. Ary nankeo amin’ny mpianatra Izy ka nahita azy matory, dia hoy Izy tamin’i Petera: Hay! tsy mahazaka ny miara-miari-tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo! 41. Miareta tory sy mivavaha ianareo, mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy; mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery. 42. […]
Posté le 19 octobre 2017 par abondance
Salamo 65:1-8 And1: Salamo 65 : 1. »Ho anao ny fanginana sy ny fiderana*, Andriamanitra any Ziona o, ary aminao no anefana ny voady ». Ny Andriamanitra mpihaino vavaka dia mendri-piderana. Ny fiderana dia fomba hanehoana ny maha Andriamanitra an’Andriamanitra. Izy dia tsara, fitiavana, mahery mamindra fo, masina, marina, hendry sy ireo toetra samihafa mampiavaka […]
Que la paix soit avec vous. Je sais que vous avez besoin d’une « VIE EN ABONDANCE » Oui! J’ai créé ce blog pour aider les autres à fonder une vie en abondance. Car dans la Bible Jesus à dit: oui, Je suis venu pour qu’ils aient la vie et l’aient en abondance » (Jean 10:10). Je suis […]
Posté le 18 octobre 2017 par abondance
Salamo nataon’i Davida, nanehoany fa mandalo izao fiainana izao. Manoloana izany dia hafa kely ny fomba fijerin’i Davida. Toa vao maika nahatonga azy hivavaka mafy tamin’Andriamanitra izany. Ary izany no hahatsapana fa mahery vavaka tokoa ny vaolombelona marina. MAHERY VAVAKA NY VAVOLOMBELONA MARINA 1) MANGATAKA NY FITARIHAN’ANDRIAMANITRA (6) Mangataka amin’Andriamanitra i Davida mba hampianatra azy […]
Nampahafantarin’Andriamanitra an’i Hezekia fa hahafaty azy NY aretiny. Vao maika nampitodika an’i Hezekia tamin’Andriamanitra ny fahafantarany izany. Olona nanana firaisam-po tamin’Andriamanitra tokoa i Hezekia ka anisan’ny antoka nampahery vavaka azy izany. Ary izany no vatsy ho antsika indray amin’ity anio. MAHERY VAVAKA NY VAVOLOMBELONA MARINA 1- MANOME LANJA NY FIJERIN’ANDRIAMANITRA NY TENANY (1-3) II […]
Posté le 17 octobre 2017 par abondance
MAHERY VAVAKA NY VAVOLOMBELONA MARINA Ny hoe : mahery vavaka dia madika hoe misy fiantraikany, mahazo valiny. Fepetra roa no hahatongavana amin’izany. 1) RAHA MAHARITRA MIANDRY VALIM-BAVAKA (1-5) Hoy ilay mpitondratena hoe: « omeo rariny aho amin’ilay manana ady amiko ». Tamin’ny voalohany dia tsy nanaiky ilay mpanapaka. Nivezivezy matetika tao amin’ny mpanapaka izy fa tsy nanaiky […]